Simplezọ isii dị mfe iji meziwanye ọdịnaya gị ọdịnaya ahịa | Martech Zone
Tuzdee, Machị 31, 2015 Douglas Karr
A ka nwere ụlọ ọrụ dị ebe ahụ na-agbaso atụmatụ na akụrụngwa dị mkpa iji mepụta ọdịnaya dị mma. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ amataghị nlọghachi na ntinye ego nke atụmatụ azụmaahịa nwere ike iweta n'ihi na ha na-ahapụ ngwa ngwa ma ọ bụ na ha aghọtachaghị ihe ha ga-ede, otu esi ede ya, na ebe ha ga-ede ya.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ gosipụtara na ire ahịa ọdịnaya emeela nnukwu ọdịiche na ọganihu na mmepe nke azụmaahịa na ụlọ ọrụ ahụ. Ahịa ọdịnaya nwere ike ịgbanwe ụzọ ndị ahịa si ele azụmaahịa anya, yana ịmụtakwu usoro a anyị mepụtara infographic akpọpụtara Etu ị ga-esi bụrụ Ọkachamara n’ahịa Ahịa.
Ihe omuma a site na Dot Com Infoway - Digital Agency Agency na-akọwapụta uru dị ukwuu nke mmemme ahịa ọdịnaya yana ụzọ dị mfe iji melite atụmatụ gị. Achọpụtara m ụfọdụ oghere oghere na Họrọ Isiokwu ndepụta nyocha - Agara m agbakwunye nyocha isiokwu na ụlọ ọrụ gị iji chọpụta isiokwu, na-enyocha isiokwu ndị a ma ama na saịtị ndị na-asọmpi, na mgbakwunye na ịkọwa ozi ụlọ ọrụ na-agbakwunye ndị na-ege gị ntị uru. Dị nnọọ ka m na-eme site na ịkekọrịta ihe ọmụma a - ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-arụ ọrụ site na ncha - mgbe ụfọdụ mmadụ bipụtara ọdịnaya nke bara uru nye ndị na-ege gị ntị ị nwere ike ịkekọrịta
Akụkụ bụ isi Ihe isii ị ga-eburu n’uche mgbe ị na -emepụta & Ọdịnaya Ahịa. M hụrụ n'anya na ha kwuo ahịa n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ dee ọdịnaya na-atụ anya na folks ga-enubata na ya… ma ọ chọrọ mgbalị karịa nke ahụ! Lee ụzọ isii dị mfe:
Jiri isi okwu na-adọrọ anya iji dọta uche.
Nọrọ nke mbụ.
Ndị mmadụ bụ anụmanụ na-ahụ anya.
Tinye mmetụta uche.
Mepụta ọdịnaya dị ukwuu.
Chọta & lelee ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị.
Tags: content Marketingmmetụta ahịa ahịausoro ịre ahịa ọdịnayaọkachamara